Ny Tompo irery ihany
Ahitana porofon'ny fisian'Ilay Andriamanitra velona eo amin'ny voariny rehetra. Efa matetika loatra no namerimberenana izany filazana izany, hany ka manjary tsy mahataitra intsony. Raha jerentsika ohatra, ny fon'Andriamanitra be fitiavana teo
am-pamoronana izao tontolo izao efa noravan'ny olombelona sy nosimbany, dia mety ho takatsika kokoa ny fomba tsara indrindra hahazoana mampianatra ny haikanto sy ny siansa.
Andeha horaisintsika ohatra ny fitondran'ny olombelona vohoka. Mampianatra antsika ny biôlôjia fa ny fahaterahan'ny olombelona dia avy amin'ny atody iray vokatry ny firaisan-tsela lahy sy vavy, izay mitombo ka tonga zazakely rehefa tonga amin'ny fitomboany. Hita manerana izany fihodinkodinan'ny fiainana izany ny mariky ny fitiavan'Ilay Andriamanitra Mpahary. Afaka mahita ny fitiavan'Andriamanitra feno hamoram-panahy isika en amin'ilay toerana itomboan'ny zaza ao am-bohoka, dia eo ambanin'ny fon-dreniny izay mitepotepo. Arakaraka ny itomboan'ilay zaza ao am-bohoka no abitan'ilay reniny ny kibony mitombo eo anatrehany. Eo ambanin'ny mason'ilay reny mitondra vohoka hatrany ny zanany, dia tahaka ilay Raintsika koa izay manara-maso ny zanany mandrakariva.
Vakio ny Rôm. 1:18-21; Sal. 19:1-6 sy ny Neh. 9:6. lnona no ambaran'ireo amintsika momba ny asan'Andriamanitra amin'ny maha-Mpamorona Azy?
Na dia 6000 taona taorian'ny fisian'ny fahotana aza, ary arivo taona maro taorian'ny nandravan'ny Safodrano ny tany, dia voaporofo amin'ny fomba mahery vaika fa misy Ilay Andriamanitra Mpamorona, ary tsy izany ihany fa eo koa ny hery sy ny fitiavana ary ny hatsaram-panahin'io Andriamanitra io amin'ny maha-Mpahary antsika Azy. Mafonja tokoa ny hevitra ambaran'i Paoly ao amin'ny Rom. 1:18-21, fa ireo izay manda io Andriamanitra io dia "tsy hanan-kalahatra" amin'ny andro fitsarana, satria ampy ny fahalalana azon'izy ireo norantnvina avy arnin'ny zavaboarin'Andriamanitra momba Azy. Raha lazaina amin'ny fomba hafa dia izao: tsy afaka hiteny izy ireo hoe: tsy nahalala aho!
Amin'izao andro sy fotoana izao, izay efa nivavahan'ny maro tamin'ny zavaboary fa tsy Ilay Mpahary, dia ilaina indrindra, ao amin'ny fanabeazana kristianina momba ny haikanto sy ny siansa, ny fanantitranterana hatrany fa Andriamanitra na Mpamorona sy Mpamelona izao zavatra ary rehetra izao. Amin'ny farany, ireo foto-kevitra sy tombantombana rehetra izay manda na manao tsinontsinona an'Andriamanitra dia tsy mitondra afa-tsy amin'ny lalan-diso. Ny fanabeazana araka izao tontolo izao dia tsy miorina afa-tsy amin'ny fiheverana fa tsy misy Andriamanitra. Tsy tokony ho latsaka amin'io fandrika io ny fanabeazana kristianina, na koa hanisika fampianarana izay mifototra amin'ny tsy fisian'Andriamanitra. Samy mitondra ny olombelona ho amin'ny fahadisoan-kevitra avokoa ireo roa ireo.
Saintsaino ny hakanton'ireo zavatra mahavariana eto amin'ity tanintsika ity, izay fatratra indrindra na dia taorian'ny fahotana aza. Ahoana no ianarantsika mandray fanantenana sy fiononana avy amin'izany, indrindra amin'ny andro fitsapana sy fahoriana Ialovan'ny tenantsika manokana?